PressReader - Ilanga: 2018-11-08 - Baphonselwa inselelo abadlali boSuthu
Baphonselwa inselelo abadlali boSuthu
Kumele bayithathise okwamafayineli eyeligi
Ilanga - 2018-11-08 - Ezemidlalo - MFANAFUTHI NDLOVU
UMHLENGI “Mgijimi” Cele ongumgadli wamaZulu FC unxusa ozakwabo ukuzinuka amakhwapha ngesimo abakusona njengoba bebambe ibhuleki kwi- log yeAbsa Premiership.
USuthu luzovovana inkani nePolokwane City koweligi ngeSonto ngo-15h30 eKing Zwelithini Stadium, eMlazi.
UCele exoxa neLANGA izolo, ucele abadlali boSuthu ukuba bashintshe igiya emidlalweni yeligi, yonke bayithathe sengathi ngeyamanqamu.
Uthi yisimo esinzima kakhulu lesi abakusona kanti basabambe umoya ngoSinethemba Sithebe olimale iqakala. Uthi unethemba lokuthi lo mdlali uzokwazi ukululama ngokushesha kwazise uqalile (izolo) ukuzihlanganisa nekilabhu.
Omunye umdlali ongeke abekhona nguMbongeni “Shoes” Gumede osenamakhadi amane aphuzi okuzokwenza ukuba angabi yingxenye yeqembu kowePolokwane.
“Umqeqeshi wethu (uCavin Johnson) usidonse ngendlebe ukuqala ukuqoqa amaphuzu. Nathi singabadlali siyakuqonda ukuthi uma singawenyusi amasokisi kusemanje singase sizibone sesisobishini olukhulu kakhulu.
"Kumele siqale manje ukunqoba imidlalo. Isikhathi siyahamba kasilindile thina.
“Ngenhlanhla enkulu siyayazi indlela iPolokwane edlala ngayo. Ijwayele ukusinika inkinga uma sidlala nayo. Siyazi ukuthi idlala ibhola elihle, kayikho phezulu mahhala. Ngifisa abalandeli bafike ngobuningi babo ukuzosikhuthaza,” kusho uCele ozimisele ngokuqhubeka nokuqobela amagoli oSuthwini.
UMHLENGI Cele ongumdlali wamaZulu FC uphonsela inselelo ozakwabo ukuba bazibambe ziqine njengoba besalokhu behleli emsileni we-log ye-Absa Premiership.